Kooxda Mogadishu City Club oo afka ciidda u dartay Dekedda kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League – Gool FM
(Muqdisho) 05 Feb 2020. Kooxaha Dekedda iyo Mogadishu City Club ayaa galabta kulan xiiso badan kuwada ciyaaray garoonka Eng Yariisow, ciyaar ka tirsanayd horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan, balse qeybtii koowaad ayaa lagu kala maray 2-0 oo ay ku hoggaaminayso Kooxda M.C.C, waxaana u kala dhaliyay Feysal Xasan Xaashi iyo Alex, sidaas ayaa lagu kala maray dheesha.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambe ee ciyaarta wiilasha M.C.C galabta waxay u aheyd malin qurux badan, maadaama laga dheehanayay firfircooni ku aaddan kubad heesiga iyo isla-jaanqaadka ciyaarta, ciyaaryahan Feysal Xasan Xaashi ayaa goolkii saddexaad ka dhaliyay Dekedda, kulanka ayuuna ka dhigay 3-0 ay ku gacan sarreysay MCC.
Bandhigga goolasha Kooxda Mogadishu City Club waxaa goolka afaraad u dhaliyay Banteke, halka goolka shanaad uu raacsaday Qeys, kulankan ayaa natiijo ahaan noqday 5-0 ay ku horkacaysay Kooxda M.C.C.
Kooxda Dekedda waxay awoodi waysay inay xitaa hesho goolka calanka, waxaana galabta lagu xasuuqay Eng Yariisow Stadium.
Ugu dambeyn naadiga Mogadishu City Club waxay galabta ka baxeen abaartii guul la’aanta ka haysatay kooxda Dekedda, ciyaarta ayaana ku soo dhammaatay 5-0 ay guusha ku raacday Kooxda Mogadishu City Club.